Fanamarinana Katôlika sy torohevitra momba ny famantarana
Cathode Famaritana ao amin'ny Chemistry
Ny kôdôdia dia ny elanelany izay iaingan'ny herinaratra. Ny electrode hafa dia antsoina hoe anode. Ataovy ao an-tsaina, ny famaritana amin'ny endriny efa misy ankehitriny dia mamaritra ny tari-dàlana fiampitàna herinaratra tsara, fa ny ankamaroan'ny fotoana dia ny elektrôna no mitondra ny tena marina ankehitriny. Mety hampikorontan-tsaina izany, ka mety hanampy amin'ny fanamafisana ny famaritana ny CCD an'ny miteomic ho an'ny cathode ankehitriny . Amin'ny ankapobeny, ny mandeha amin'izao fotoana izao dia miala amin'ny lalana mifanohitra amin'ny hetsika elektronika.
Ny teny hoe "cathode" dia novolavolain'ny William Whewell tamin'ny taona 1834. Avy amin'ny teny grika hoe kathodos , izay midika hoe "midina" na "taranaka" ary midika hoe ny masoandro milentika. Michael Faraday dia nanontany an'i Whewell momba ny anarana nomena ho an'ny taratasy nosoratany tamin'ny elektrolysis. Faraday dia manazava fa ny herinaratra elektrôlôjika dia mihetsika amin'ny alàlan'ny elektrôla "avy any atsinanana ka hatrany andrefana, na, izay hampatanjaka ny fanampiana ny fahatsiarovana, izay manjavona ny masoandro." Ao amin'ny sela elektrôlôtika, ny herinaratra dia mamela ny elektrôlôzika amin'ny lafiny andrefana (manidina any ivelany). Talohan'izany, Faraday dia nanolotra ny teny hoe "mialokaloka", manala ny "dysiode", "westode" ary ny "occiode". Tany Faraday dia tsy hita ny electron. Ao amin'ny vanim-potoana maoderina, fomba iray ahafahana mampiaraka ny anarana misy amin'izao fotoana izao dia ny mieritreritra ny kôdôda ho toy ny "midina" ho an'ny elektronika ao anaty efi-trano.
Ny Cathode Positive na ny Disadisa?
Ny fanararaotan'ny kôdida amin'ny fanajana ny anônô dia mety ho tsara na ratsy.
Ao amin'ny sela elektrochemika , ny kôdôda dia ny elanelany izay misy ny fihenan-kery . Ny cation dia voasarika amin'ny kôdida. Amin'ny ankapobeny, ny kôdôda dia ny elastika tsy mety ao anaty sela elektrôlôtika izay mifehy ny elektrolysis na ao anaty battera mihodina.
Ao amin'ny batera entrée na cellule galvanique , ny kôdôda dia ny terminal tsara.
Ao anatin'io toe-javatra io dia manindrahindra ny elektrôlôte mankany amin'ny kôdôza tsara ny iony pozitif, fa ny elektronika kosa mandroso mankany amin'ny kôdida. Ny hetsiky ny elektronika manoloana ny kôdôda (izay mitondra fiampangana diso) dia midika fa avy any amin'ny kôdida (fiantohana mivaingana) ny fivoahana ankehitriny. Noho izany, ho an'ny sela galvanika Daniell, ny electrode varahina dia ny kôdôda sy ny terminal tsara. Raha navadika ny cellule Daniell, dia misy sela elektrôlôtika novolena, ary ny elanelan'ny varahina dia mbola mijanona ho tosika tsara.
Ao amin'ny tavoahangy vaksa na ratra katarida, ny kôdôda dia ny terminal tsy misy. Eo no misy ny elektronika miditra ao amin'ilay fitaovana ary manohy ao anaty tavoahangy. Misy fepetra tsara mivoaka avy amin'ny fitaovana.
Ao amin'ny diode, ny kôdôda dia asehon'ny teboka manondro ny marika arrow. Io no farafaharatsiny izay misy mandeha amin'izao fotoana izao. Na dia mety hivezivezy eo amin'ny andaniny roa amin'ny diode aza ny ankehitriny, ny fametrahana dia mifototra hatrany amin'ny tari-dalana ahafahana mandeha mora kokoa.
Mnemonics ho fahatsiarovana ny Cathode amin'ny Chemistry
Ankoatra ny mnemonic CCD, dia misy hafa mpikirakira hafa hanampiana ny kodiarana amin'ny simia:
Ny Cat Cat AnOx dia manohana ny fanamafisana amin'ny fanonganana sy ny fihenam-bidy eo amin'ny kôdida.
Ny teny hoe "katôd" sy ny "fihenam-bidy" dia ahitana ny taratasy "c." Ny fihenam-bidy dia mitranga eo amin'ny kôdida.
Mety hanampy ny "saka" amin'ny cation amin'ny maha-mpankasitraka azy ary "a" amin'ny anionany ho mpanome.
Ao amin'ny electrochemistry, ny kôdôklika dia manoritsoritra ny fizotran'ny electron avy amin'ny kôdôma ho vahaolana. Ny famokarana herinaratra dia ny famokarana herinaratra avy amin'ny vahaolana ho an'ny anode.
Famaritana ny hydronium ion
Volumetric Flask Famaritana
Famaritana ny fandrefesana ny fandaminana sy ny ohatra
Famaritana ny vondrona Alkoxy
Famaritana amin'ny fotoana ao amin'ny Chemistry
Famaritana sy fampiasana Amalgama
Teny sy fomba fiteny - Avia
Qué est préféré par le permis de permis de regeneration des États-Unis
Información fundamental fundo de visa E-1 para comerciantes bajo tratado
Ahoana ny fiarovana ny Board Ouija?
Fampianarana momba ny vonjy taitra
Torohevitra tsotra momba ny fitomboan'ny bodybuilding mba hanampy anao hisakafo sy hanodina
5 ho an'ny 2016: baolina kitra Golf avy amin'ny Nike, Pinnacle, TaylorMade
Lohahevitra manohitra adihevitra
Fampiasana ny matoanteny Verb
Ny tantaran'ny gilasy sy ny kirany
Ny Arnold Palmer Misotro: Ahoana no hanaovana azy sy ny anarana nipoirany
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny afobe?
Skytianina any amin'ny Tany Fahiny
Krismasy Quotes nosoratan'ny mpanoratra malaza
Top 15 mpilalao sarimihetsika mahagaga indrindra hatramin'izay
Zava-dehibe amin'ny ray ny zanakao
Ny hevitry ny fihetsika amam-bolana sy ny fihenan'ny fihavanana aloha
Henry Quinn's Great Quotes
Hira Great Great Covered by The Beatles